Izindaba - Umehluko phakathi kwemikhiqizo ebunjiwe yenjoloba nemikhiqizo ekhishiwe
Umehluko phakathi kwemikhiqizo ebunjiwe yenjoloba nemikhiqizo ekhishiwe
Umehluko Phakathi Kwemikhiqizo Ebunjiwe Yenjoloba Nemikhiqizo Eyandisiwe
Ngokuthuthuka okusheshayo komkhakha wokukhiqiza, imikhiqizo yenjoloba isetshenziswa kabanzi. Ngemikhiqizo yenjoloba nepulasitiki engabonakala kuyo yonke indawo, enjengendandatho yokuvala uphawu, umugqa wenjoloba, ishubhu yerabha, umkhono wenjoloba, i-gasket njalonjalo, ngabe uyazi ukuthi zenziwa kanjani? Ngokuvamile, kunezindlela ezimbili ezivamile zokubumba imikhiqizo yenjoloba: ukubumba nokukhipha, okungenziwa kube yizimpawu zenjoloba yokubumba kanye nemichilo ye-extrusion ngokulandelana. Imikhiqizo eqediwe inemisebenzi ehlukene nezinqubo ezahlukahlukene, futhi ngayinye inezinzuzo nezinkinga zayo. Uyini umehluko phakathi kwemikhiqizo yenjoloba yokubumba kanye nemikhiqizo ye-extrusion?
Esikhathini sokubumba, i-powder flake ne-agglomerate rubber block kuqala kwenziwa okungenalutho ngesimo esifanayo nomkhiqizo ophelile, obekwe emgodini wesikhunta sokushisa, bese ubunjwa, uqiniswe noma uhlanganiswe ngokuvala isikhunta, bese udicilelwa phansi ukuthola umkhiqizo.
Isetshenziswa kabanzi embonini nakwezolimo, ezokuthutha, umkhakha kagesi nowamakhemikhali, imishini yokwakha, izidingo zansuku zonke nezinye izinkambu ezibonakalayo.
Imikhiqizo yenjoloba eyenziwe ngenqubo yokubumba ikakhulukazi izixhumi zesakhiwo, izimpawu zokuvikela kanye nezingxenye zokufakwa kukagesi, ezenziwe ngamasongo wokuvala uphawu, ama-gaskets, imikhono yokuzivikela, ama-plugs wokufaka uphawu, imikhono yokugoqa, ama-gaskets, ama-seals kawoyela, izingxenye ezixubile neminye imikhiqizo.
I-Extrusion, eyaziwa nangokuthi i-extrusion molding noma i-extrusion molding, isho indlela yokucubungula lapho izinto zishiswa khona futhi zifakwe ipulasitiki ngenkathi iqhutshelwa phambili phambili ngokufa ngokusebenzisa isenzo se-extruder barrel kanye ne-screw.
Ekubumbeni i-extrusion, i-extruder, ifa futhi ife, kanye namadivayisi asizayo ahambisanayo ngokuvamile akhethwa ngokuya ngohlobo nokuma kwemikhiqizo esetshenzisiwe, bese kuthi izimo zenqubo ye-extrusion zinqunywe, njengejubane lesikulufa, ingcindezi yokufa, ukusethwa izinga lokushisa, njll. Ekwenziweni kwe-extrusion, okokusebenza kuvamise ukufakwa kupulasitiki, kupholiswe futhi kuphulukiswe noma kuhlanjululwe. Imikhiqizo ehlukene ingatholwa ngezinqubo ezahlukahlukene ze-extrusion.
I-extrusion ingasetshenziswa ekucutshungulweni kwe-thermoplastic nenjoloba ukuthola ukubethelwa, i-granulation kanye nokuhlungwa kwenjoloba. Imikhiqizo ye-Extrusion isetshenziswa kabanzi embonini yezokwakha, embonini ye-petrochemical, ekukhiqizeni imishini, ezintweni zikagesi, ezimotweni nasezindiza.
Sisebenzisa inqubo ye-extrusion, singenza umugqa wokufaka uphawu, ipayipi, ipuleti, ishidi, ifilimu, umshini wokukopisha wephrinta, ucingo nentambo embozwe umkhono wenjoloba, ama-noodle amasondo enjoloba, ithubhu elingaphakathi, imikhiqizo ehlukahlukene eyinkimbinkimbi yemikhakha enqamulelayo, engenalutho, eqinile, ekhihliza amagwebu eminye imikhiqizo ephelile yenjoloba kanye nepulasitiki.
Isikhathi Iposi: Jan-27-2021